သင်္ကန်းကိုတော့ ကြည်ညိုတယ်။လူကိုတော့မကြည်ညိုဘူးဆိုသူများအတွက်ပါတဲ့… – Shwe Pann Thee
Shwe Pann Thee Religious သင်္ကန်းကိုတော့ ကြည်ညိုတယ်။လူကိုတော့မကြည်ညိုဘူးဆိုသူများအတွက်ပါတဲ့…
တစ်ချိန်ကစစ်ကိုင်းဘက် ဝါးချက်ချောင်တွင်ဝါးချက်ဆရာတော်ကြီးသီးတင်းသုံးနေထိုင်၏။ဆရာတော်ကြီးသည် ကျမ်းတတ်ရုံမျှမကအနေအထိုင် လည်း ဝိနည်းအရာတွင်သိပ်သည်းကျစ်လစ်အောင် နေထိုင်၍ အများအားဖြင့်ဓုတင်ဖြင့် ဖြူစင်အောင် အထူးနေထိုင်၏။ ဟိတ်လည်းမရှိ ဟန်လည်းမဆောင်ကြည်ညို ဖွယ်အသွင် အမြဲရှိအောင် နေထိုင်၏။
မကြာမကြာ မန္တလေးဘက် သို့ကူးလာ၏။လာတိုင်းဘုရားကြီးတိုက် ဦးရန်ကုန်ကျောင်းသို့အမြဲဝင်၏။ဦးရန်ကုန်ဆရာတော်ကား မန်းတခွင်နှံ့အောင် ကျော်ကြားတော်မူသောဆရာတော်တစ်ပါးပေ။ ဦးရန်ကုန်သည် ဝါးချက်ဆရာတော်အားအထူးလေးစား၏။ တစ်နေ့တွင် ဝါးချက်ဆရာတော်ကြီးမန္တလေးဘက်သို့ ကူးလာရာ ဘုရားကြီးတိုက်ဦးရန်ကုန်ကျောင်းရောက်၏။ဦးရန်ကုန်ကား စာချလျက်ရှိ၏။
စာဝါပြီးလျှင် ဆရာတော်ကြီးအား ဦးချရောက်လာ၏။ဦးရန်ကုန်ရောက်လာလျှင် ဝါးချက် ဆရာတော်ကြီးက မဆီမဆိုင် လက်ပံသား ဓားနှင့် ချိုင်ဆိုတာလို ကောက်ကာငင်ကာ “ဟဲ့မောင်ရန်ကုန်……မင်းတို့တောင်ပြင်မှာ သီလလုံတာဘယ်နှစ်ပါး ရှိသလဲ”ဟုမေးလေ၏။
ရုပ်တရက်သော် ဆရာတော်ဦးရန်ကုန်ကပဟေဠိဆန်သောမေးခွန်းဖြစ်၍ အဖြေကြပ် နေ၏။ သို့သော် ပညာရှင်ချင်း ဉာဏ်စမ်းသဘောဖြစ်၍ဦးရန်ကုန်က”တောင်ပြင်မှာသီလလုံတာ တစ်ပါးရှိပါသည်ဘုရား”ဟုလျှောက်ထားလေသည်။ ဝါးချက်ဆရာတော်က “ဘယ်သူလဲ မောင်ရန်ကုန်ရဲ့”ဟုမေးလေ၏။ ” မဟာမြတ်မုနိပါဘုရား”ဟု လျှောက်ထားလေသည်။”ငါလည်း ထင်သားပဲ”ဟုဝါးချက်ဆရာတော်ကြီးကပြောကာရယ်မော၍နေပါတော့သည်။
ထို့အတူပါပဲ ခုခေတ်ကြီးထဲမှာ တစ်ချို့သင်္ကန်းကိုသာကြည်ညိုတာ လူကိုမကြည်ညိုဘူးဟုပြောဆိုနေကြ၏။သင်္ကန်းကိုသာ ကြည်ညိုရင်တော့ပုံပါ ကိုယ်တော်ကြီးသာပင့်သွားကြပါ။ဒီသစ်တုံးကိုယ်တော်ကြီးသည်အာပါတ်လည်း မသင့်။ ပါတီနိုင်ငံရေးလည်းမဟော။စာချ စာသင်ပရိယတ္တိပဋိပတ္တိလည်း မပါ ။ဘယ် အဖွဲ့အစည်းမို့ ဆွမ်းမလောင်း ဟုဘယ်သူတွေ ဘာပြောပြော တုဏှီဘောနဲ့ငြိမ်သက်နေမယ့်ကိုယ်တော်ကြီး ဖြစ်နေလို့ပါတဲ့။
အရှင်ခန္တီစာရ (ဒီပဲယင်း)19. 2. 2021သတ္တဝါအားလုံး သာယာရွင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေ
တစ္ခ်ိန္ကစစ္ကိုင္းဘက္ ဝါးခ်က္ေခ်ာင္တြင္ဝါးခ်က္ဆရာေတာ္ႀကီးသီးတင္းသုံးေနထိုင္၏။ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ က်မ္းတတ္႐ုံမွ်မကအေနအထိုင္ လည္း ဝိနည္းအရာတြင္သိပ္သည္းက်စ္လစ္ေအာင္ ေနထိုင္၍ အမ်ားအားျဖင့္ဓုတင္ျဖင့္ ျဖဴစင္ေအာင္ အထူးေနထိုင္၏။ ဟိတ္လည္းမရွိ ဟန္လည္းမေဆာင္ၾကည္ညိဳ ဖြယ္အသြင္ အၿမဲရွိေအာင္ ေနထိုင္၏။
မၾကာမၾကာ မႏၲေလးဘက္ သို႔ကူးလာ၏။လာတိုင္းဘုရားႀကီးတိုက္ ဦးရန္ကုန္ေက်ာင္းသို႔အၿမဲဝင္၏။ဦးရန္ကုန္ဆရာေတာ္ကား မန္းတခြင္ႏွံ႔ေအာင္ ေက်ာ္ၾကားေတာ္မူေသာဆရာေတာ္တစ္ပါးေပ။ ဦးရန္ကုန္သည္ ဝါးခ်က္ဆရာေတာ္အားအထူးေလးစား၏။ တစ္ေန႔တြင္ ဝါးခ်က္ဆရာေတာ္ႀကီးမႏၲေလးဘက္သို႔ ကူးလာရာ ဘုရားႀကီးတိုက္ဦးရန္ကုန္ေက်ာင္းေရာက္၏။ဦးရန္ကုန္ကား စာခ်လ်က္ရွိ၏။
စာဝါၿပီးလွ်င္ ဆရာေတာ္ႀကီးအား ဦးခ်ေရာက္လာ၏။ဦးရန္ကုန္ေရာက္လာလွ်င္ ဝါးခ်က္ ဆရာေတာ္ႀကီးက မဆီမဆိုင္ လက္ပံသား ဓားႏွင့္ ခ်ိဳင္ဆိုတာလို ေကာက္ကာငင္ကာ “ဟဲ့ေမာင္ရန္ကုန္……မင္းတို႔ေတာင္ျပင္မွာ သီလလုံတာဘယ္ႏွစ္ပါး ရွိသလဲ”ဟုေမးေလ၏။
႐ုပ္တရက္ေသာ္ ဆရာေတာ္ဦးရန္ကုန္ကပေဟဠိဆန္ေသာေမးခြန္းျဖစ္၍ အေျဖၾကပ္ ေန၏။ သို႔ေသာ္ ပညာရွင္ခ်င္း ဉာဏ္စမ္းသေဘာျဖစ္၍ဦးရန္ကုန္က”ေတာင္ျပင္မွာသီလလုံတာ တစ္ပါးရွိပါသည္ဘုရား”ဟုေလွ်ာက္ထားေလသည္။ ဝါးခ်က္ဆရာေတာ္က “ဘယ္သူလဲ ေမာင္ရန္ကုန္ရဲ႕”ဟုေမးေလ၏။ ” မဟာျမတ္မုနိပါဘုရား”ဟု ေလွ်ာက္ထားေလသည္။”ငါလည္း ထင္သားပဲ”ဟုဝါးခ်က္ဆရာေတာ္ႀကီးကေျပာကာရယ္ေမာ၍ေနပါေတာ့သည္။
ထို႔အတူပါပဲ ခုေခတ္ႀကီးထဲမွာ တစ္ခ်ိဳ႕သကၤန္းကိုသာၾကည္ညိဳတာ လူကိုမၾကည္ညိဳဘူးဟုေျပာဆိုေနၾက၏။သကၤန္းကိုသာ ၾကည္ညိဳရင္ေတာ့ပုံပါ ကိုယ္ေတာ္ႀကီးသာပင့္သြားၾကပါ။ဒီသစ္တုံးကိုယ္ေတာ္ႀကီးသည္အာပါတ္လည္း မသင့္။ ပါတီႏိုင္ငံေရးလည္းမေဟာ။စာခ် စာသင္ပရိယတၱိပဋိပတၱိလည္း မပါ ။ဘယ္ အဖြဲ႕အစည္းမို႔ ဆြမ္းမေလာင္း ဟုဘယ္သူေတြ ဘာေျပာေျပာ တုဏွီေဘာနဲ႔ၿငိမ္သက္ေနမယ့္ကိုယ္ေတာ္ႀကီး ျဖစ္ေနလို႔ပါတဲ့။
အရွင္ခႏၲီစာရ (ဒီပဲယင္း)19. 2. 2021သတၱဝါအားလုံး သာယာ႐ြင္လန္းခ်မ္းေျမ့ပါေစ
ကပ်ဆေးခြင်းဘေးမှ လွတ်ကင်းကြစေရန် “အဋ္ဌာနမေတံ” ဂါထာတော် ရွတ်ပါကပ်ဆေးခြင်းဘေးမှ လွတ်ကင်းကြစေရန် “အဋ္ဌာနမေတံ” ဂါထာတော် ရွတ်ပါ
ကပ်ဆေးခြင်းဘေးမှ လွတ်ကင်းကြစေရန် “အဋ္ဌာနမေတံ” ဂါထာတော် ရွတ်ပါ ဤဂါထာတော်သည်ကား…. ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကို အရှင်ဒေဝဒတ် ကျောက်မောင်းဆင်၍လုပ်ကြံပြီးကာစ ပုထုဇဉ်ရဟန်းတော်တို့က ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်အတွက်စိုးရိမ်ကြသဖြင့် တုတ် တောင်ဝှေး စသည်တို့ဖြင့် ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကိုအကာအကွယ်ပေးရန်စုဝေးရောက်ရှိလာကြရာ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်က ကာကွယ်ပေးရန်မလိုကြောင်း ရှင်းလင်းမိန့်ကြားတော်မူရာတွင်တစ်ကြိမ်။ နောက်နေ့မြို့တွင်းသို့ဆွမ်းခံကြွမည့်အချိန် နာဠာဂီရိ ...
စီးပွားလာဘ်လာဘ ပွင့်လန်းဖို့ လာဘ်မပိတ်အောင် ဒါတွေကိုရှောင်ပါစီးပွားလာဘ်လာဘ ပွင့်လန်းဖို့ လာဘ်မပိတ်အောင် ဒါတွေကိုရှောင်ပါ
စီးပွားလာဘ်လာဘ ပွင့်လန်းဖို့ လာဘ်မပိတ်အောင် ဒါတွေကိုရှောင်ပါ ကလေး လူကြီး လူတိုင်းသိထားသင့်တဲ့အရာတွေပါ။ “လူ့ဘဝမှာ စီးပွားလာဘ်လာဘ ပွင့်လန်းဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ အိမ်တစ်အိမ်မှာ စီးပွားလာဘ်လာတွေ ပိတ်ဆို့နေမယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီ့အိမ်ဟာ သီရိမင်္ဂလာမရှိတော့ပါဘူး။ အမင်္ဂလာအိမ်ပဲ ဖြစ်တော့မယ်။ဒီတော့ ဒါတွေရှောင်ပါ – ...
လူတွေ မသိကြတဲ့ အတိတ်နမိတ်များလူတွေ မသိကြတဲ့ အတိတ်နမိတ်များ
၁။ အိမ်ထဲ ဖားခုန်၀င်မူ ငွေရအံ့။ ၂။ အိမ်ထဲ ပိတုန်း၀င်မူ ဧည့်သည်လာအံ့။ ၃။ အိမ်ထဲ ဓါးခုတ်ကောင်၀င်မူ ပေးကမ်းမည့် ဧည့်သည်လာအံ့။ ၄။ အလံတင်ရမူ ရည်မှန်းချက် အောင်မြင်အံ့။ ၅။ တင်လိုက်သည့်အလံ ပြန်လျှောကျမူ ...